Actualidad आईफोनमा हामी बोक्छौं 10 बर्ष भन्दा बढी समाचार, ट्यूटोरियल्स, विश्लेषण, समीक्षा, अनुप्रयोगहरू, सुरक्षा र। को रूपमा एप्पल सम्बन्धित सबै चीजहरूको बारेमा दैनिक रिपोर्ट गर्ने धेरै बढी वस्तुस्थितिलाई कहिल्यै नबिर्सन, जसले हामीलाई बन्न अनुमति दिएको छ एप्पल सम्बन्धित सब भन्दा व्यापक रूपमा पढ्ने स्प्यानिश बोल्ने ब्लगहरू मध्ये एक.
Actualidad आईफोन टीम को एक टीम बाट बनेको छ एप्पल उत्पादनहरु मा व्यापक अनुभव संग प्रकाशकहरु। वास्तवमा हामी मध्ये धेरैले कपडामा सुनको जस्तो पहिलो आईफोन समात्छौं। हाम्रो ब्लगमा तपाईले कुनै पनि समस्याको समाधान भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, अनौंठो लाग्न सक्छ हाम्रो ट्यूटोरियल सेक्सनको माध्यमबाट। यदि तपाईं यसलाई फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं हामी मध्ये एकलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामी सँगै मिलेर हामी समाधान खोज्न सक्दछौं।
तपाईले एप्पलले बजारमा बर्षो शुरु गर्नुहुने सबै उत्पादनहरूको हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पूरा विश्लेषण पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, हामी एप्पलको सीधा प्रतिस्पर्धाको सबै भन्दा महत्वपूर्ण टर्मिनलहरूको सुरुवात विश्लेषण पनि गर्दछौं, तुलना गरेर र विन्दुमा फाइदा र बेफाइदा बिन्दु विश्लेषण गर्दै ... कुनै पनि समय निष्पक्षता नगुमाईकन.
Actualidad आईफोनको सम्पादकीय टीम को एक समूह बाट बनेको छ आईफोन विज्ञहरू एप्पल।
यदि तपाईं पनि Actualidad आईफोन टीमको हिस्सा हुन चाहानुहुन्छ, यो फारम भर्नुहोस्
पेशागत चिकित्सा र बाल रोग विशेषज्ञ। एप्पल प्रयोगकर्ता २०० since देखि, जब मैले मेरो पहिलो आइपड नानो खरीदें। त्यस बेलादेखि, सबै प्रकारका आईफोन, आईप्याड, म्याक, एयरपड, एप्पल वाच मेरा हातहरू पार गर्दैछन् ... रोजाई वा आवश्यकताको आधारमा, मैले घण्टा पढ्ने, हेर्ने र सम्बन्धित सबै प्रकारका सामग्री सुन्नेमा आधारित सबै कुरा सिकिरहेको छु। एप्पलको साथ, र त्यसैले म ब्लग, युट्यूब च्यानल र पोडकास्टमा मेरा अनुभवहरू साझा गर्न चाहन्छु।
मेरो एप्पल को दुनिया मा पहिलो foray एक म्याकबुक को माध्यम बाट थियो, "गोरा"। चाँडै, मैले GB० जीबीको आईपड क्लासिक किनें। यो २०० 40 सम्म थिएन जब मैले आईफोनको लागि पहिलो मोडल एप्पलको साथ लिपि बनाए, जसले मलाई पीडीए बिर्सिन छिटो बनायो। म १० बर्ष भन्दा बढि देखि आईफोन समाचार लेख्दै छु। मैले सधैं मेरो ज्ञान साझा गर्न मनपराएको छु र यो गर्नको लागि एक्चुलिडेड आईफोन भन्दा उत्तम तरिका के हो।
सम्पादक, geek र "संस्कृति" एप्पल को प्रेमी। स्टीभ जॉब्सले भनेझैं: "डिजाइन मात्र देखा पर्दैन, डिजाईनले कसरी काम गर्दछ।" २०१२ मा मेरो पहिलो आईफोन मेरो हातमा पर्‍यो र त्यसबेलादेखि त्यहाँ कुनै एप्पल छैन जसले मलाई विरोध गर्यो। एप्पलले हार्डवेयर र सफ्टवेयरको स्तरमा दुबै प्रस्ताव राखी राखेको कुराको दृष्यबाट निरन्तर विश्लेषण, परीक्षण र अवलोकन गर्दै। एप्पल "फ्यानब्वॉय" हुनु भन्दा टाढा म तपाईंलाई सफलताहरू भन्न चाहान्छु, तर म गल्तीहरू बढी रमाउँछु। ट्विटरमा @ miguel_h2012 को रूपमा र इन्स्टाग्राममा @ MH.Geek को रूपमा उपलब्ध छन्।
नमस्कार! मैले एप्पल संसारमा आइपड शफलको साथ शुरू गरें, सबै चीज अद्भुत थियो, तपाईले आइट्यून्स प्लेसूचीमा समावेश गरेको यादृच्छिक गीतहरूको साथ तपाईंलाई अचम्मित पार्ने सम्भावना। त्यसपछि एक आइपड नानो, एक आईपड क्लासिक, र आईफोन came आयो ... कपर्टिनो इकोसिस्टम द्वारा मोहित मैले एक्चुलिडाड आईप्याडमा मेरो स्थान फेला पारे, यसपछि हामीले एउटा वास्तविक टीमको साथ एक्चुलिडाड आईफोनमा उफ्रिनुभयो, जसको साथमा म "साझा" "कपुर्टिनोको, र जससँग म हरेक दिन जान्ने क्रममा छु। विच्छेदन? हो, तर एक एप्पल ग्याजेट with को साथ
एप्पलले हाम्रो जीवन सजिलो बनाउन उपकरणहरू सिर्जना गर्दछ। तर यो निरन्तर विकसित भइरहेको ब्रह्माण्ड हो, र म सधै अप टु डेट हुन चाहन्छु। म मेरो मञ्जानिटाहरूसँग नयाँ अनुभवहरू सिक्न र अभ्यास गर्न उत्साहित छु र यसलाई पाठकहरूसँग साझा गर्नुहोस्। जबदेखि मेरो एप्पल वाचले मेरो जीवन बचायो, जॉब्सद्वारा सिर्जना गरिएको ब्रह्माण्डमा अंकित।
सबै कुरा जुन टेक्नोलोजीसँग र सबै प्रकारका खेलहरूसँग म गर्न उत्साहित छु। मैले एपलबाट धेरै वर्ष अघि आईपड क्लासिकबाट यसको सुरुवात गरें - जसको हात उठाउने कोही पनि थिएन - पहिले ऊ आफैंले गर्न सक्ने सबै प्राविधिक ग्याजेटहरूको सामना गरिरहेको थियो। एप्पलको साथ मेरो अनुभव विस्तृत छ तर तपाईं नयाँ चीजहरू सिक्न सँधै तयार हुनुहुन्छ। यस संसारमा, टेक्नोलोजीको विकास साँच्चै छिटो हुन्छ र एप्पलको साथ यो अपवाद छैन। २०० Since पछि, जब १२० जीबी आईपड क्लासिक मेरो हातमा आयो, एप्पलमा मेरो रुचि जगायो र मेरो हातमा अर्को आईफोन, थियो, आईफोन जुन मोभिसारसँग सम्झौतामा बाँधिएको थिएन र अहिलेसम्म प्रत्येकसँग बर्ष म नयाँ मोडेलको लागि जान्छु। यहाँ अनुभव सबै कुरा हो र १२ बर्ष भन्दा बढी बर्षमा म एप्पल उत्पादनहरूसँग छु भनेर म भन्न सक्दछु कि मेरो ज्ञान घण्टा र घण्टाको आधारमा प्राप्त गरिएको छ। मेरो खाली समयमा म विच्छेदन गर्दछु, तर म मेरो आईफोन र म्याकबाट धेरै टाढा हुन सक्दछु। तपाईंले मलाई @ jordi_sdmac को रूपमा ट्विटरमा पाउनुहुनेछ।
मलाई इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, र विशेष गरी एप्पल ब्रान्डको मन पर्छ। मेरो महान लत मेरो आईफोनमा सबै प्रकारका संगीतहरू सुन्दै छ, यसको ठूलो ध्वनि गुणको कारणले, म बिभिन्न अनुप्रयोगहरू चलाउन पनि रमाउँछु जुन कुनै समयमा उपयोगी हुन सक्छ।
आर्किटेक्ट र गीक, इन्टरनेट को बारे मा भावुक, नयाँ टेक्नोलोजीहरु र एप्पल संसार। म लगातार लेख्छु र आईफोनको विकासको बारेमा जान्छु र यस ब्रान्डसँग सम्बन्धित सबैकुरा, जुन म सँधै कागजात गर्दैछु।
पत्रकार आईफोनमा विशिष्ट। म यस महान ब्रान्डबाट नयाँ उपकरणहरू पत्ता लगाउन संसार भ्रमण गर्दैछु, जुन यसका साथ आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्न र सजिलो जीवन पाउन सम्भव छ।
क्रिस्टिना टोरेस प्लेसहोल्डर छवि
हाल म ब्ल्गर संसार र घटनाहरूको संगठन को लागी समर्पित छु। मलाई इन्टरनेट मन पर्छ, र एप्पलको साथ सबै चीज। म नयाँ आईफोन तरिकाहरू सिक्नमा रमाईलो गर्छु त्यसैले आशा गर्दछ कि तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनमा फेला पार्न सक्ने सबै तरिकाहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
सिक्न र सिकाउन सधैं उत्सुक। मलाई थाहा छ सबैमा रिपोर्ट गर्न मन पराउँछु, र यसले यो तथ्यलाई थप्यो कि म सधैं आईफोनमा अप-टु डेट हुँ, यस ब्रान्डको समाचार राम्रोसँग संचार गर्न मद्दत गर्दछ।
टेक्नोलोजीको लागि मेरो उत्कटता एप्पलको साथ जन्मेको थियो र केही वर्ष अघि ममा फूट ल्याउँदछ र अब म अझ बढी सिक्ने र सिक्न रोक्न सक्दिन। यस कारणका लागि, म आईफोन र मेरो अनुभव र ज्ञानको साथ ब्रान्डको अन्य उपकरणहरूको सबै भन्दा राम्रो समाचारको बारेमा जानकारी दिन लेख्छु।
म एप्पल टेक्नोलोजीप्रति मायाले भरिएको छु, एउटा ब्रान्ड जसमा मँ विस्तृत अनुभव, दुबै उपकरणको प्रयोग र आईफोन जस्ता उत्पादनहरूमा कागजातमा। म उत्तम रिपोर्टहरू र समाचारहरू लेख्न म सँधै अद्यावधिक छु।
कम्प्युटर वैज्ञानिक, एक आईओएस प्रयोगकर्ताको स्थापना पछि र एक म्याक प्रयोगकर्ता भन्दा बढी पाँच बर्ष। मलाई यात्रा गर्न मन पर्छ, तर जहिले पनि मेरो आईफोनको साथ सब भन्दा कठोर तरिकामा रिपोर्ट गर्न, र स्मार्टफोनको साथमा लिन सक्नुहुने उत्तम फोटोहरू लिनको लागि।
नयाँ प्रविधिहरूको प्रेमी, र आईओएस र ओएसएक्सको प्रयोगकर्ता। निस्सन्देह, म एप्पलको फ्यान हुँ, र त्यसैले म यस पत्रिकामा लेख्छु ताकि पाठकहरूलाई आईफोनका सर्वश्रेष्ठ समाचारहरूबारे सचेत गराउन सकिन्छ।
लेखन र आईफोनहरू मेरो दुई जोडी हो। र २०० 2005 पछि मसँग मिल्ने भाग्य छ। सबै भन्दा राम्रो? म अझै पनि मजा लिन्छु पहिलो दिन कुनै पनि नवीनताको बारेमा कुरा गर्यो जुन एप्पलले आईफोन फोनका लागि बजारमा ल्याउँदछ।
म केटा हुँ जसले एप्पल संसारलाई माया गर्दछु। मलाई मनपर्दो जब सम्म यो मेरो रुचि विषयहरु को लागी जान्न मन पर्छ। त्यसकारण, मेरो लेखहरूमा तपाईले आईटमहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाईको दिन प्रति दिन उपयोगी हुनेछ तपाईको आईफोनको साथ।
ग्याजेटहरू र मोबाइल टेलिफोनीको बारेमा पत्रकार भावनात्मक। म आईफोन, आईप्याड, एप्पल वाच र म्याकबुक प्रो को बारे मा सँधै सचेत रहन्छु, त्यसैले मेरो लक्ष्य यो छ कि सबै पाठकहरू खबरको बारेमा सचेत छन्।